Izitsha zobumba for izimbali - isici esibalulekile hhayi kuphela ngenxa yanoma yisiphi umtshali, kodwa futhi ngoba emizi ejwayelekile, sifisa ukwenza ikhaya lakho ethokomele futhi emuhle. Khetha eyodwa noma enye inguqulo ebhodweni ubumba unganakile kubonakala indaba ayinzima kakhulu, kodwa eqinisweni, kukhona ezinye izici.
Clay imbiza ikhethwa balimi kakhulu. It has eziningi eziwusizo. Okokuqala, isitsha anqamule esinjalo umbala esihle sihamba emanzini hhayi kuphela, kodwa futhi izakhi kanye nomoya-mpilo. Futhi, izindonga ukungena nakwamanye amazwe bakwazi shabalala umswakama okweqile, ngaleyo ndlela esindisa izitshalo. Uma esitsheni sebumba ifakwa ngqo enhlabathini Peat, imbali ngeke humidified kuphela kodwa futhi uthole isabelo ezinye izinto ezidingekayo ukuze kube nentuthuko yayo nokukhula. Le ndlela muhle ikakhulu uma udinga ukushiya umnikazi isitshalo isikhathi eside.
Nokho, belingana crock has ngebuhle nebubi. Lezi zihlanganisa kungenzeka ukulahlekelwa okusheshayo umswakama eduze heater, ibhethri noma yimuphi omunye umthombo ukushisa. Cijela amanzi ukuhwamuka kuholela ukupholisa zomhlaba, okungase kube nomthelela ongemuhle izinhlobo ezithile nezimila. On izimbiza Ceramic ngokuvamile kubonakala limescale. Ngezinye izikhathi crock "ukuhlobisa" ulwelwe unicellular. Ukuze balahle izinkinga okukhulunywe ngaye ngenhla, kwanele ukusula ebusweni yokuhlanza izitsha amazambane, bese uxubha kahle. Ngaphambi kokusebenzisa i-ebhodweni entsha, kufanele uqale cwilisa kahle ke. Uma esetshenziselwa ukutshala izimbali akuyona izitsha ezintsha, kuyancomeka ukuba pre-ugeze khona.
Ukuze womshini imbiza ekhaya badinga ummese, ubumba plastic, baking iphepha, futhi induku isifanekiso zibophe. Kungcono ukusebenzisa polymer ubumba, ngoba ayidingi omiswe olwengeziwe.
Isinyathelo 1. Clay roll ku ipuleti kabani ukujiya kufanele kube cishe 1 isentimitha.
Isinyathelo 2. Sika imbiza kwi-stencil ngaphambilini walungisa.
Isinyathelo 3. Xhuma onqenqemeni izitsha usebenzisa izinti kushelele kwakhiwa ukumboza umqhewu.
Isinyathelo 4. Bhala umkhiqizo ukuze ome (uma isetshenziswa polymer ngobumba) noma uthumele it kuhhavini (e zesi ubumba ngokuvamile imfundo samanje).
Isinyathelo 5: Hlola ubuqotho imbiza. Uma konke ngokulandelana, uqhubekele kwezulu izitshalo.
Ungakwazi kahle ukuhlobisa imbali izimbiza ngezandla zabo, ukwenza imihlobiso noma upende imibala usebenzisa i-stencil lelungiselelwe. Kufanele akhethe imibala ezokwenza ufane kakhulu imbali. Njengoba ubumba excellently ubamba amanzi, umdvwebo kufanele usetshenziswe izikhathi eziningana.
Ngakho, ukuhlobisa abavamile ubumba ebhodweni udinga ukulungisa itheyiphu sokulinganisa, umbusi, wokulinganisa, upende (engcono yokusebenzisa acrylic), iphepha eteyipini, ama-stencil.
Isinyathelo 1: Kala emaphethelweni ipherimitha izitsha bese wabelana zonke izindonga izingxenye eziningana alinganayo.
Isinyathelo 2. Faka tape paper ukuze ebusweni nalutho yayibonisa ekhethekile. Sebenzisa upende, futhi izingqimba eziningana. Ngemuva omiswe, iphethini itheyiphu iyasuswa.
Isinyathelo 3. Ngosizo stencil ku esitsheni sebumba engeza izithombe ezimbalwa kakhudlwana.
Uma kukhona amakhono athile kanye ithalente, ungakwazi kalula ukwenza ngaphandle izifanekiso.
Ultrasonic inja isivikelo: nokubuyekeza amakhasimende. Ingabe kunengqondo ukuba ukuthenga repeller?
Ubhontshisi Green: ukulungiswa izitsha ezihlwabusayo
Kungani abantu besakholelwa ukuthi kukhona khona umphefumulo?